Etazonia, Fifidianana : Izay Tian’Ireo Firenena Sisa Manerantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2018 6:24 GMT
Topi-maso indray mihelatra monja ao amin'ny haba-tranonkalanay Voices without Votes, na amin'ny tontolon'ny bilaogy maneran-tany, dia tsy isalasalàna fa izay irian'ny olona ho filoha [amerikana] dia i Barack Obama. Na eo aza ny endri-pifaninanana tena ety dia ety any Etazonia, dia mbola tian'ny olona ny fomba fitarihany olona, ny fandaharanasany amin'ny politika ivelany, ny fomba famahàny olana, ary angamba ambonin'izany rehetra izany, dia tena hafa noho i George W. Bush izy, izay, mazava ho azy , fa tsy ankasitrahan'ny olona.
Sarintany maro maneho fifidianana maneran-tany no mitantara ny fomba fijerin'izao tontolo izao. Na tsy ara-tsiansa aza izy ireo, dia toa manondro zotra iray.
Fiarahamiasa iray teo amin'ny Gallup sy ny Foreign Policy antsoina hoe If the Wotld Could Vote (Raha afaka mifidy izao tontolo izao) (amin'ny teny anglisy) dia mampiseho sarintanin'izao tontolo izao, ahitàna loko mampita hafatra momba ireo mpomba an'i Obama sy i McCain … afa-tsy ny hoe tsy misy ireto farany (na ny marimarina kokoa, “tsy mahatapa-kevitra/tsy fantatra” no asehon'ny ampahany lehibe amin'izao tontolo izao, ary ny sisa dia mirohotra amin'ny Obamania ). Dikasary tamin'ny 29 Oktobra no mampiseho ireo firenena 10 izay manohana bebe kokoa an'i Obama sy McCain :
Ny tranonkala iray atao hoe If the world could vote (“raha afaka nifidy izao tontolo izao” ; amin'ny teny anglisy) izay, maro mpankafy kokoa, dia tranonkala sahala amin'io ihany sady mitovy ny tanjony. Tanora iray 22 taona any Islandy no namorona azy. Hazavain-dry zareo amin'ny pejiny “questions les plus fréquentes” (ireo fanontaniana mateti-pitranga) ny antony hanarahany akaiky ny hevitra manerantany :
Fitia te-hahafantatra fotsiny. Lehilahy matanjaka, mety ho ny olona matanjaka indrindra manerantany ny filohan'i Etazonia. Samy manana ny heviny momba izay mety ho filohan'i Etazonia ny tsirairay. Nihevitra izahay fa mety hahaliana ny hahafantatra izay ho filoha manaraka raha toa ny olona manerantany ka afaka mifidy . Fanamby ihany koa ny ezaka hihoarana ny isan'ny mpifidy nandritra ireo fifidianana amerikana farany teo. Noho izany, aelezo ny vaovao !
Vato 541.167 avy amin'ny firenena 204 no azon'ilay haba-tranonkala amin'izao fotoana izao, ka 86,9% an'i Barack Obama ary 13,1% an'i John McCain ( Obama sy McCain ihany no hisafidianana)
Mbola misy tetikasa iray antsoina hoe The World For (“Izao tontolo izao ho an’ “, amin'ny teny anglisy), mbola hahafahan'ny mpisera hifidy na Barack Obama na John McCain. Asehon'ny dikasarin'ilay tranonkala, tamin'ny 29 Oktobra, ireo firenena vitsivitsy mitodika amin'i McCain :
Lybia,Iràna ary ny Repoblika Demokratikan'i Kongô no isan'ireo firenena manohana an'i McCain, araka ity tranonkala ity. Na izany aza, misy tranonkala iray mitovy aminy, ny an'ny The Economist, mampiseho fa mifanohitra amin'ny an'ny The World For ny fifidianana tany Iràna.
Isam-bato 85% noho ny isam-bato ratsy dia ratsy 15% ho an'i McCain no anohanan'i Iràna an'i Obama araka ny The Economist.
Ny tranonkala iray fahadimy sady farany antsoina hoe The Takeaway («Sakafo Entina»), miara-miasa amin'ny Voices without Votes, dia nanolotra ny pejin'ny Fifidianana 2008. Ny fizaràna ankapobeny amin'ny tetikasany manokana dia mampiseho, atao andrakandrana, ny isan'ny vato azo omen'ny firenena tsirairay raha toa ka tsy maintsy mifidy izy. Araka ny filazany manokana :
Amin'ny maha-mpandray anjara amin'ny tetikasan'ny Kolejin'ny mpifidy iraisam-pirenena an'ny The Takeaway anay dia omenay vaton'ny Kolejin'ny mpifidy ny firenena tsirairay. Tena andrankandrana tanteraka, saingy raha afaka mifidy ny olom-pirenena any amin'ny firenena hafa, dia tianay ny milalao amin'ny angona sasany sy manangona ireo vato ireo, tsy ny vahoaka anefa no fototra, fa ireo tarehimarika mampiseho ny fifandraisana ara-politika, ara-tafika, ara-toekarena sy sosialy amin'ireo firenena ireo sy Etazonia.
Trandraho ity lisitra manaraka ity dia omeo anay ny hevitrao. Tsy ampoizina ? Iza no firenena mendrika hanana solontena bebe kokoa ? Iza no firenena zara raha hanana solotena ? Ary ny zava-dehibe kokoa, fa nahoana ?
Ahoana ny hevitrao momba ny fifidianana amerikana ? Manandrama mifidy any amin'ny iray amin'ireo tranonkala ireo, na raha ohatra ianao ka mpitoraka bilaogy, omeo rohy anankiray izahay !